जनवरी - Best of Japan
यस पृष्ठमा, म जनवरीमा होक्काइडोको मौसमको बारेमा वर्णन गर्नेछु। यदि तपाईं जनवरीमा होक्काइडोमा यात्रा गर्नुहुन्छ भने, कृपया कोट जस्ता पर्याप्त जाडो सुरक्षा नबिर्सनुहोस्। होक्काइडोको पश्चिम तर्फ जापानको सागरबाट आउने बादलहरू हिउँ पर्नेछ र यति धेरै हिउँ टाढा पर्थ्यो। होक्काइडोको पूर्वपट्टि, हिउँ पछाडि पश्चिम तिर झर्दैन। यद्यपि तापमान कहिलेकाँही फ्रिजिंग बिन्दु १० डिग्री तल झर्छ। कृपया सावधान रहनुहोस्। यो लेखले तपाईंलाई चित्रणको मद्दत गर्न धेरै चित्रहरू समावेश गर्दछ जनवरीमा होक्काइडोमा मौसमको कल्पना गर्न, त्यसैले कृपया उनीहरूलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्। होक्काइडोमा मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल जनवरीमा टोकियो र ओसाकाको मौसम बारे केही लेखहरू छन्। टोक्यो र ओसाकासँग होक्काइडो भन्दा भिन्न मौसम अवस्था छ, त्यसैले कृपया सावधान हुनुहोस्। जनवरी र होक्काइडोको बारेमा प्रश्न र उत्तर होक्काइदोमा जनवरीमा हिउँ पर्दछ? यो जनवरी मा Hokkaido भर घाम लाग्छ। विशेष गरी मध्य जनवरी देखि, त्यहाँ धेरै हिउँ छ। जापानको सागरबाट ओसिलो बादलले होक्काइडो पहाडहरूमा हिर्काउँछ र हिउँ निम्त्याउँछ। यो अक्सर जापानको समुद्रको नजिक Niseko, ओटारु र सप्पोरोमा सुक्खा हुन्छ। अर्कोतर्फ, प्रशान्त पक्षको पूर्वी होक्काइडोमा, यो धेरै चिसो छ, तर त्यहाँ तुलनात्मक हिसाबले थोरै छ। जनवरी मा होक्काइडो कती चिसो छ? यो जनवरी मा होक्काइडो मा धेरै चिसो छ। साप्पोरो जस्ता सहरी क्षेत्रहरूमा पनि, दिनको अधिकतम ...
यदि तपाईं जनवरीमा ओसाकामा बस्नुहुनेछ, तपाईं आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ कि त्यस समयमा मौसम कस्तो छ। यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई मौसमको बारेमा केहि विचारहरू दिनेछु। ओसाका, अन्य जापानी शहरहरु जस्तै, जनवरी को अन्त देखि फेब्रुवरी को शुरुवात मा वर्ष को सबैभन्दा चिसो मौसम हुनेछ। यस कारणका लागि, त्यहाँ जनवरीको शुरुमा नयाँ वर्षको बाहेक धेरै पर्यटकहरू छैनन्। ओसाकामा लगभग हिउँ छैन। दिनहरू घाममा पर्ने सम्भावना हुन्छ त्यसैले यदि तपाईं चिसोमा कडा हुनुभयो भने, तपाईं धेरै आरामसँग यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ। ओसाकासँग धेरै तातो र स्वादिष्ट खाना छ, त्यसैले कृपया ती पनि रमाउनुहोस्! ओसाका मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। ओसाकामा मौसमका लागि तलका लिंकहरू पालना गर्नुहोस्। तल जनवरीमा टोकियो र होक्काइडोको मौसम बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडोको साथसाथ ओसाका जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम ओसाका भन्दा केही फरक छ। ओसाका जनवरी मा मौसम (अवलोकन) ग्राफ: ओसाका जनवरी मा तापमान परिवर्तन ※ जापान मौसम एजेन्सी द्वारा जारी डाटा को आधार मा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षमा औसत हो (१ 30 1981१-२०१०) ओसाकाको जलवायु अन्य जापानी शहरहरू जस्तै प्रत्येक वर्ष जनवरी र फेब्रुअरीमा चिसो छ। ओसाकाको टोकियो जत्तिकै उस्तै मौसम छ। यद्यपि जनवरीमा ओसाका टोकियो भन्दा थोरै चिसो छ। ओसाकामा जनवरीमा कम वर्षा छ। यो भन्न सकिन्छ कि मौसम स्प्यासीe स्पट वरिपरिको यात्राको लागि उपयुक्त छ। ...
जनवरीमा, टोकियो धेरै चिसो छ, त्यसैले तपाईंलाई कोट वा जम्पर चाहिन्छ। मौसम अनुरूप छ र तपाइँ एक राम्रो घामको दिन अधिक अक्सर अनुभव गर्नुहुनेछ। त्यहाँ लगभग कुनै हिउँ छैन, तर यदि यो सुन्न गयो भने रेल सेवा निलम्बन हुन सक्छ। यस पृष्ठमा, म जनवरीमा टोकियो मौसम डेटा छलफल गर्नेछु। यो जानकारी को माध्यम बाट, म आशा गर्दछु कि तपाईले जनवरीमा टोकियो मौसमको एक विचार प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तल टोकियोमा मासिक मौसमको बारेमा लेखहरू छन्। यदि तपाइँ अधिक जान्न चाहानुहुन्छ भने लेखमा क्लिक गर्नुहोस्। तल जनवरीमा ओसाका र होक्काइडोको मौसमका बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडो र टोकियो जान चाहानुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम टोकियो भन्दा बिलकुलै फरक छ। जाडोको कपडाका लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। टोकियो मा जनवरी मा मौसम (अवलोकन) ग्राफ: टोकियो मा जनवरी मा तापमान परिवर्तन ※ जापान मौसम एजेन्सी द्वारा जारी डाटा को आधार मा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षको औसतमा (१ 30 1981१-२०१०) टोकियो जनवरीमा ठण्डा छ। होक्काइडो जस्तो हिउँ धेरै छैन, तर त्यहाँ त्यस्तो दिनहरू छन् जब सबै भन्दा कम तापक्रम ठण्डा भन्दा कम हुन्छ। दिनको समयमा पनि, प्राय: व्यक्ति बाहिर कोट बिना बाहिर धेरै समय खर्च गर्न सक्दैन। यो जनवरी मा धेरै वर्षा छैन। यसको सट्टामा तपाईले धेरै राम्रा नीलो आकाशहरू आशा गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने वर्षा हुँदैन, हावा सुख्खा छ। केहि मानिस चिसो लाग्छ किनभने तापमान कम छ र हावा सुख्खा छ। हिउँ कम नै वर्षा हुन्छ, तर एक पटक हुन्छ, यातायात मा ...
जनवरीको सुरूमा धेरै जापानी मानिसहरु नयाँ वर्षको बिदा लिन्छन्। यस समयमा मन्दिर र मन्दिरहरू भीडभाड छन्, त्यसैले कृपया सावधान रहनुहोस्। जनवरीमा, होक्काइडोमा मात्र होइन तर जापानको सागरपट्टि होन्शु र हिमाली क्षेत्रहरुमा हिउँ पर्न थाल्छ। यदि तपाईं त्यस्तो क्षेत्रमा जानुहुन्छ, तपाईं जापानको हिउँ प्रकृतिबाट आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। जनवरीको उत्तरार्द्ध पछि, केही मन्दिरहरू र मन्दिरहरूमा सामान्य हिउँदको चाड हुन्छ। तिनीहरू आफैंमा उपस्थित हुन पनि सिफारिस गरिन्छ। जनवरीमा टोकियो, ओसाका, होक्काइडोको जानकारी यदि तपाईं जनवरीमा टोकियो, ओसाका वा होक्काइडो जाने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने, कृपया तलका स्लाइडरमा छवि क्लिक गर्नुहोस् अधिक जानकारीका लागि। जनवरीको शुरुमा मन्दिर र तीर्थ स्थानहरूमा धेरै भीड हुन्छन् जनवरीको सुरूमा, जापानमा हरेक वर्ष नयाँ वर्षका घटनाहरू हुन्छन्। मानिसहरू प्रायः मन्दिर वा मन्दिरको भ्रमण गर्न प्रार्थना गर्दछन् जसले वर्षलाई राम्रोसँग बिताउन सक्दछन्। यदि यस समयमा तपाईले जान चाहानु भएको मन्दिर वा मन्दिर ठूलो छ भने, तपाईले नयाँ बर्ष अवधिमा लाखौं मानिस आउने अपेक्षा गर्न सक्नुहुनेछ। एकैचोटि सम्पूर्ण भ्रमण गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या देखेर तपाईं आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ। यदि तपाईं भीड मान्नुहुन्न भने, तपाईं जापानी जनता मुख्य मन्दिर र मन्दिरको लागि एकदम व्यवस्थित हिंड्न सक्नुहुन्छ। वास्तविक हिउँको दृश्यको लागि जानुहोस् जनवरीमा होक्काइडोमा होपानुको जापान सागर छेउछाउ र पहाडी क्षेत्रहरूमा हिउँ झर्दै बारम्बार वर्षा हुन थाल्छ। केही क्षेत्रमा हिउँ धेरै मीटरहरू जम्मा गर्न सक्दछ ...